Ukunyusa ngeLucidPix nokumaketha Imikhiqizo yakho - uLucidPix
Ukunyusa ngeLucidPix nokumaketha Imikhiqizo yakho
Izinkampani eziningi zifuna indlela yokwenza khuphula ukufinyelela kwabo kokuthengisa, ikakhulukazi ekuwohlokeni komnotho okukhona njengamanje. Abathengi basebenzisela ukubona okuthunyelwe okufanayo kwansuku zonke, ngokubukeka okufanayo nokuqukethwe okufanayo, okufaka umnikazi webhizinisi elincane, ngesabelomali esincane sokumaketha ngokulingana, kusimo esisheshayo. Kukhona ubuchwepheshe obusha obuguqula ikhasi lamabhizinisi amaningi nokukhulisa okulandelayo; Izithombe ze-3D ezivela I-LucidPix.
Nale elula ukusebenzisa uhlelo lokusebenza, abanikazi bebhizinisi kanye nabaphathi bangabukeka behlakaniphile ngenkathi beshayela amakhasimende amasha ngomnyango. Konke okudingayo a ukulanda ngokushesha kanye nokuchofoza inkinobho, futhi uzoba nekhono lokwehlukana nomncintiswano. Ukunyusa ibhizinisi lakho ngamaLucidPix 3D Izithombe azinazinhlungu futhi azisebenzi.
Ngemuva kokulanda i- Uhlelo lokusebenza lweLucidPix, manje uzoba namandla okuguqula izithombe zakho zibe yizingcweti zobuciko besimanje bobuchwepheshe. Ukuze uqale, vula uhlelo lokusebenza. Lapho uzocelwa ukuthi wakhe i-akhawunti yeLucidPix noma ungene ngemvume nge-akhawunti yakho yeGoogle noma ye-Facebook. Uma ungene ngemvume, zizwe ukhululekile ukubheka phakathi kuhlelo lokusebenza futhi funda ngezici zayo.
Usebenzisa uhlelo lokusebenza lweLucidPix
Uma kukhulunywa ngohlelo lokusebenza uqobo, kungenza i-novice ibukeke njengewizadi ye-tech nokuthi ilula kanjani. Ekhayeni eliyisiqalo kuzoba nezimpawu ezintathu ezansi kwesikrini sakho nezimbili phezulu. Isithonjana esingaphansi kwesobunxele yinkinobho yasekhaya, okuzokubuyisela emuva kulokho ngqo, ikhasi eliyikhaya.
Inkinobho ephakathi ezansi kwesikrini sakho yinkinobho yokudala isithombe. Lokhu kuzokuhambisa ekhasini lapho kunezinketho ezingezansi kwesikrini, kufaka phakathi i- “3D Uzimele” kanye ne- “3D Photo”. Kuqala uzoba ekhasini le- “3D Frame” elikuvumela ukuthi uthathe isithombe kuleso sikhashana ngesendlalelo esisebenzayo noma isendlalelo esihambahamba ngokunikeza isithombe ikhwalithi ye-3D. Kunezinketho eziningi ongazikhetha kuzo ezithinta izithombe ezibandakanya ukudla, izindawo, izindawo zokuhamba nokuningi. Zonke izindlela ezinhle zokwenza okuhlangenwe nakho kwakho kujabulise futhi kujabulise okwamanje futhi okuthunyelwe kwakho kuyathandeka kakhulu ezilalelini zakho.
Inketho yesibili ikhasi "le-3D Photo" lapho uthatha isithombe onaso kufoni yakho bese usiguqula sibe isithombe se-3D, noma uthwebule isithombe esisha se-3D ngaphakathi kohlelo lokusebenza lweLucidPix. Mane ukhethe isithombe ofisa ukuguqula i-3D. Ngemuva kwemizuzwana embalwa yokuguqula isithombe sakho sakudala se-2D sithuthukisiwe kuyo yonke imikhakha emithathu, ikunikeze amandla okuwabelana ngobuningi bezindlela kwelinye lamapulatifomu amaningi ezokuxhumana.
Ukwabelana ngeLucidPix Indalo
Uma usudale isithombe se-3D eLucidPix, uzonikezwa amandla okuhlanganyela indalo yakho kuLucidPix, Facebook, Instagram, kanye neminye imiyalezo eminingi yezinhlelo zokusebenza zokuxhumana nabantu. Khetha ukuthi ufuna ukwaba kanjani phansi kwesikrini, lapho uzobona khona konke kusuka ekwabelaneni kuya kugalari yakho ye-3D; ukwazi ukwaba isithombe sakho sobukhulu obuthathu ku-Facebook, Snapchat, noma ku-Instagram; futhi ekugcineni ngiyiguqulele kwi-GIF noma ividiyo ukuze wabelane ngayo kodwa sicela.
Lapho wabelana njenge-GIF noma ividiyo, uyakwazi ukucacisa ukunyakaza kwesithombe se-3D. Mhlawumbe indalo yakho ibukeka kahle kakhulu lapho uslayida eceleni noma usondela esithombeni. Ezinye izithombe zingabukeka kahle kumodi ye-orbit, ukuzama ukubona ukuthi yikuphi okubukeka kungcono kakhulu. Ngokufanayo, ungahle ukhethe ukukhulisa noma unciphise ukunyakaza kwe-3D, usize ukwenza umphumela we-3D uphume kusikrini. Lezi zinketho zikuvumela ukuthi ukhuthaze kalula ibhizinisi lakho neLucidPix, uqinisekise ukuthi uthola ukuzibandakanya okuningi kakhulu.
Ukubuyela ekhasini lasekhaya, inkinobho yokugcina ngakwesokunene sebha engezansi isithonjana sekhasi lephrofayela. Amafreyimu wakho we-3D, izithombe, kanye nokuguqulwa kufinyelelwa ngokuthepha isithonjana sokusakazwa kwesithombe ngakwesokudla kwesikrini. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi, izilungiselelo zephrofayela yakho zitholakala.
LucidPix Super Umsebenzisi
Uma ungathanda ukufinyelela ngokugcwele kuzo zonke izici zeLucidPix nezinketho zokuthumela ngaphandle, uzofuna ukuba ngumsebenzisi weLucidPix Super. Ukuthepha kunoma yiziphi izinkinobho ze- "Thola Super" kulo lonke i-al kuzokunikeza amandla okubhalisela njalo ngenyanga noma ngonyaka. Njengomsebenzisi weLucidPix Super uzoba nokufinyelela okugcwele kulo lonke uhlelo lokusebenza, kufaka phakathi konke ukuhlunga, amafreyimu we-3D, isivinini sokuthumela, ukuthekelisa idatha ye-3D nokuningi. Lezi zici zizokuvumela ukuthi ube nokulawula okuningi kunokuphuma kweLucidPix, unikeze ngezifiso ezibalulekile ezingasiza ekuqiniseni ukuzibandakanya. Izinketho ezingeziwe ezivulwe ngokubhalisela i-LucidPix Super User zingasiza ngempela lapho kuthuthukiswa ibhizinisi lakho, ngokuqinisekisa ukuthi amakhasimende akho abona umphumela ongcono kakhulu we-3D.
Ukwabelana Igalari yeLucidPix
Inkinobho yokugcina ekhasini eliyisiqalo isabelo sangaphakathi nohlelo, esikuvumela ukuthi wabelane ngokudalwa kwakho nawo wonke umuntu osebenzisa uhlelo lokusebenza lweLucidPix. Ukuphela kokufanele ukwenze ukukhetha ukuthi yisiphi isithombe se-3D ongathanda ukusisebenzisa, kanye nemephu ejule ehambelana nesithombe, unikeze isihloko ngobuciko bakho, bese usuqedile. Ngemuva kokubuyekezwa okusheshayo kweqembu lethu ukuze uqiniseke ukuthi okuqukethwe kufanelekile, kuzokwabiwa nabo bonke abasebenzisi beLucidPix.
Kafushane, kumnandi, futhi kulula, ngendlela wonke umuntu afuna ukuba yiyo. Manje usukulungele ukuqala ukukhuthaza ngeLucidPix.
Kulula kakhulu ukusebenzisa izithombe zakho ezintsha ze-3D, futhi ngokulinganayo njengokulula ukuzikhuthaza wena noma inkampani yakho. Njenganoma yisiphi esinye isithombe ongasisebenzisa, kunezindawo nezikhathi ezifanele ongafaka ngazo isithombe ukuthola imiphumela emihle, konke kuncike kulokho okudingayo njengomphromoshisi. Ngabe ufuna ukunciphisa amanani ashibhile kwiwebhusayithi yakho? Sebenzisa isithombe se-3D phezulu ekhasini lakho ukudweba intshisakalo yabantu. Ngabe ufuna ukusebenzisana okuningi ekhasini lezokuxhumana? Thumela ezinye izithombe ze-3D ezenza abantu bayeke ukuskrola okuphakelayo kwemidiya yabo yezenhlalo futhi bathathe isikhashana ukubheka okuthunyelwe kwakho (empeleni bathola ukuzibandakanya okuningi kunesithombe esijwayelekile!). Akukho yini ukuxhumana okuningi njengokuxhumanisa njengoba ufuna kumikhankaso yakho ye-imeyili? Zama ukufaka isithombe se-3D kulowo mlayezo ukuze uthuthuke ngokuchofoza ngamanani.
Amathuba okusebenzisa angapheli, udinga nje ukudala ithoni efanele nomyalezo ngesithombe sakho ukuze uhambisane nenhloso yakho yokugcina. Ngakho-ke phuma lapho wenze umehluko emsebenzini wakho wokuphromotha. Leli thuluzi elisha ebhokisini lamathuluzi lakho lokukhangisa linamandla okwenza wena nenkampani yakho libe ngcono ngokusebenzisa nje lona. Khumbula njalo, uma ukhuthaza ngeLucidPix, usuyisinyathelo esandulela umncintiswano.
Iphupho Ngemuva kweLucidPix →← Ungayifaka kanjani futhi Uyikhiphe kanjani Uhlaka lwe-3D